Filed under: အထိမ်းအမှတ်, အတွေးအခေါ်, အတွေ့အကြုံ, ဆောင်းပါး —4Comments	12/09/2010
လူ့ဘ၀ဟာ သေဆုံးခြင်းမှာ အဆုံးသတ်တယ်၊ ဘယ်လိုနေမလဲ ဘယ်လိုသေမလဲလူတွေက အလုပ်တွေ လုပ်နေကြတယ်၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပိုလုပ်လာရတယ်။ ပြည်တွင်းက အိမ်ကို ခွဲခွာပြီး တစ်နယ်တစ်ကျေးက အိမ်တစ်ခုမှာ သွားနေရတယ်၊ အလုပ်ပိုလုပ် ၀င်ငွေ ပိုရှာ ရုန်းကန် နေကြရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ရုန်းလိုက် ကန်လိုက် ကုန်းလိုက် ခံလိုက်နဲ့ လောကဓံတွေကို ဖြတ်သန်းနေရတယ်၊ အဲဒီမှာလည်း မှတ်မှတ် သားသားဖြစ်ဖြစ် မေ့မေ့လျော့လျော့ဖြစ်ဖြစ် မွေးနေ့တွေကို ဖြတ်ရပြန်တယ်၊ မှတ်တိုင်တစ်ခုကို ကျော်ရပြန်တယ်။ တချို့ အဲဒီမှာ ဗုံးကနဲလဲ ဒုံးကနဲ သေသွားကြတယ်။
တလောလေးကပဲ ကလေးတစ်ယောက် လူ့လောကကို ဘယ်လို ရောက်လာသလဲဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခု ကျွန်တော်ကြည့်ထားတယ်။ အားပါးပါး… မလွယ်ပါလားဗျ။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ (မေတ္တာမိခင် ကျေးဇူးရှင်တွေ) ကို အဲဒီ ကလေးမွေးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့တင် ကျွန်တော် အလွန် လေးစား ချစ်ခင် သွားပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ့် သန္ဓေသားလောင်းကနေ မွေးတဲ့အထိ ၉ လ ကျော်၊ ၁၀ လ နီးပါး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရပြီး၊ အဲဒီကနေ မွေးထုတ်လိုက် ရတာဟာ တော်ရုံသတ္တိနဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါမွေးရုံပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီကနေ ချေး၊ သေးက အစ သန့်စင် သုတ်သင်၊ ကျွေးမွေး ပြုစုပြီး ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အရွယ်အထိ စောင့်ရှောက်ဖို့ ဆိုတာ ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့ကြ တယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပါ။ တချက်ကလေး စောင်းငဲ့ကြည့်ရုံနဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ သိသာ ထင်ရှားတာ မျိုးပါ။
ဗီဒီယိုကလစ်လေးကို လေးငါးခါလောက် ကျွန်တော် ပြန်ပြန်ကြည့်ပါတယ်၊ မိခင်ရဲ့ မိန်းမကိုယ်ထဲကနေ တင်းနစ်ဘောလုံးအရွယ် သာသာလောက်ရှိတဲ့ ကလေးခေါင်းလေးဟာ အတင်းကို တိုးထွက်နေပါတယ်၊ အပေါက်က သေးလေတော့ တော်တော်ရုန်းကန်ရပါတယ်။ မိခင်ကလည်း တညည်းညည်း တညူညူနဲ့ ညှစ်ပေး တွန်းပေးပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ မိခင်က အားတော်တော် စိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မွေးနေ့ဖြစ်လာမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမနေ့ကို အသေအချာ ကြည့်နေပါတယ်။ လူသေးသေးလေးဟာ လောကထဲ ၀င်ရောက်ဖို့ အတင်းရုန်းထွက် နေရပါတယ်။ လူ့လောကကို အ၀င်မှာကတည်းက အားမာန်အပြည့်နဲ့ စရုန်းနေရပါပြီ။ ထွက်လာမယ့် လူကလေးရော၊ သူ့မိခင်ပါ ရေကုန်ရေခမ်းကို စရုန်းနေရပါပြီ။ မတော်လို့များ တစ်ယောက်ယောက်က အားနည်းခဲ့ရင် မြန်မြန်ခွဲမွေးရင် မွေး၊ မမွေးရင်တော့ မိခင် ဒါမှမဟုတ် ကလေး ဒါမှမဟုတ် နှစ်ယောက်စလုံး အသက်ဆုံးပါးနိုင်ကိန်းပါ။ ဒီလိုပဲ ကလေးမွေးရင်း ကလေး ဒါမှမဟုတ် မိခင် ဒါမှမဟုတ် ကလေးရော မိခင်ပါ သေဆုံးသွားခဲ့တာတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါပြီ။
ဘ၀အစ လူ့လောကအ၀င်မှာပဲ တော်တော် ရုန်းကန်ပြီးမှ ထွက်လာပြီး ကလေးလေးဟာ အော်ပါတယ်၊ ငိုပါတယ်။ “ငါ လာပြီဟေ့“ လို့ ပြောတယ်ပဲ ဆိုပါစို့…။ အဲဒီကနေ နို့မစို့ရလို့ ငို၊ မုန့်မစားရလို့ ငို၊ ကျောင်းမတက်ချင်လို့ ငို၊ စာမရလို့ ငို၊ စာမေးပွဲ မအောင်မှာ ကြောက်လို့ ငို၊ ကျောင်းမပြီးမှာ ပူပန်လို့ ငို၊ အလုပ်မရမှာ စိုးလို့ စိတ်ပူ၊ အလုပ်ရာထူး တိုးဖို့၊ ပိုကောင်းတဲ့ အလုပ် ရဖို့၊ ပိုက်ဆံပို ၀င်ဖို့၊ နိုင်ငံခြား သွားရဖို့ အို… တစ်ခုပြီးတစ်ခု ငိုလိုက်၊ အော်လိုက်၊ ကြောက်လိုက်၊ မှောက်လိုက် အမျိုးမျိုး ရုန်းကန်ခဲ့ရတာ အခုလို မှတ်တိုင်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကျော်ဖြတ်ရင်းပေါ့။
ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ သေသွားသူတွေ များခဲ့ပြီအဲဒီတော့ မွေးရာကနေ ရုန်းလိုက်ကြ ရတာ သေတော့ရော… ဟား ဟား သေတော့လည်း ရုန်းရပြန်တာ ပါပဲဗျာ။ လွယ်လွယ်နဲ့ သေတယ်များ အောက်မေ့ ပါသလား။ ဘယ်လွယ်လိမ့် မလဲဗျာ၊ မသေ သေးဘူး၊ အိုလာ ရတယ်၊ အခု အသား အရေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က အသား အရေမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး၊ အခု ရုပ်ရည်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အပိုင်း အခြားက ရုပ်ရည် မဟုတ် တော့ဘူး၊ အခုသွားတွေ၊ နားတွေ၊ မျက်စိတွေဟာ အရင်လိုတော့ မကောင်း တော့ဘူး။ ပြီးတော့ အနာရောဂါတွေ တဖြည်းဖြည်း ဖိစီးလာတာကို ခံစားမယ်၊ ငယ်ငယ်တုန်း ဆိုးရင် ဆိုးခဲ့သလောက်၊ ဇိမ်ခံခဲ့ရင် ဇိမ်ခံခဲ့သလောက် နည်းနည်း နာမယ်၊ များများ နာမယ်၊ ဆေးရုံဆေးခန်း ပုံမှန်သွားရမယ်၊ အကြိမ်ကြိမ် သွားရမယ်။
အိုလာမယ်၊ နာလာမယ်ဆိုတော့ အဲဒီမှာ ပြုစုမယ့်သူ၊ ဂရုစိုက်မယ့်သူ ရှိတယ်ဆိုရင် တော်ပါသေးရဲ့…၊ ဂရုစိုက်မယ့်သူလည်း မရှိ၊ ပိုက်ဆံကလည်း မရှိ၊ ဆေးဝါးကလည်း မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ သေဖို့သာ ပြင်…။ ဟုတ်ပြီ သေတော့မယ်။ ညဘက် မပျော့်တပျော်အိပ်ရင်း မနက်ခင်းလင်းတုန်း တစ်ချက် အိပ်မောအကျမှာ သေသွားမယ်လို့များ ထင်ပါသလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ တရားပီပီပြင်ပြင် မလုပ်ထားဘူး၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှု များများ မပြုထားဘူး၊ သတိ၊ သမာဓိ ကောင်းကောင်း မရှိထားဘူး ဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သေပါလိမ့်မယ်… အားကြီးကြီး…။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော် သင်္ချိုင်းကုန်းက ပြန်လာပြီး နောက်တစ်ရက်မှာပဲ ရန်ကုန်က ဘဏ်လုပ်ငန်းပညာရှင်နဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင် ဆရာဦးဝင့်ကျော် ဆုံးတယ်လို့ ကြားတယ်။ ကျွန်တော်က သင်္ချိုင်းက ပြန်လာပြီး နောက်တစ်ရက်မှာမှ ဆောင်းပါးရေးတာပေါ့လို့ ထားလိုက်ပြီး၊ နောက်နေ့ကျတော့ ကွန်ပျူတာ ဖွင့်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်ကြည့်တုန်းမှာပဲ ဆရာဦးဝင့်ကျော် ကွယ်လွန်ကြောင်း မတ်ဆေ့ဂ်ျ တွေ့လိုက်ရတယ်။ လူတိုင်းကတော့ သေမှာချည်းပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ လူတော်တော် များများက ဒီနေ့တော့ ငါ မသေလောက်သေးပါဘူးလို့ မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။
အ၀င်ထက် အထွက်ဟာ ခက်လိမ့်မယ်သင်္ချိုင်းကုန်း သွားတာ ဘာထူးသလဲ ဆိုရင်တော့ လူတွေ ဘယ်လို သေခဲ့ပြီလဲ၊ ကျန်ရစ်သူ တွေက ဘယ်လို စိတ်တွေ ထားကြသလဲ၊ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်စွာ သေတဲ့သူတွေ၊ လူတွေကို ကောင်းစေချင် ကောင်းအောင် လုပ်ပေးခဲ့သူတွေ ဘယ်လို ဂုဏ်ပြုခံရ သလဲ၊ သူတို့ကို ကျန်ရစ်သူ တွေက ဘယ်လို လွမ်းဆွတ် ကြသလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် နည်းနည်း ပိုရိပ်စား မိလာပါတယ်။
သေရင်တော့ ပြီးသွားပြီလို့ လူမိုက်တွေ က ထင်တတ်ကြပါတယ်၊ မြန်မာစကားပုံမှာလည်း “သေသောသူ ကြာရင်မေ့“ ဆိုတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓ နောက်က လူတွေ သန်းထောင်နဲ့ချီ သေသွားခဲ့ပြီပဲ၊ သခင်ယေရှု နောက်က၊ တမန်တော် မိုဟာမက် နောက်က လူတွေ သေခဲ့ကြပြီပဲ။ သူတို့ကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်နေကြတုန်းပဲ။ သူတို့ ဟောပြော ဆုံးမ လမ်းညွှန်ခဲ့တာတွေကို အရိုအသေပြု လိုက်နာနေကြတုန်းပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ…။
ဒီတော့ ချုပ်ရရင် လောကထဲ ကျွန်တော်တို့ ရုန်းရင်းကန်ရင်း ၀င်ခဲ့ကြပြီ၊ ပျော်ရင်းမောရင်း တွန်းရင်းတိုက်ရင်း ရှင်သန်နေခဲ့ကြပြီ။ အဆုံးအမှတ်ကိုလည်း အကန်းဘ၀နဲ့ လုံးလုံးမိုက်မိုက် ထွက်သွားမလား၊ ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ ရေစုန်မျောလိုက်မလား၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး မိုက်ချင်သလို မိုက်လိုက်ကြမလား။ ကျွန်တော်ကတော့ စဉ်းစားနေပါတယ်၊ အချိန်အားရတိုင်း အသေအချာကို စဉ်းစားနေပါတယ်။
3 Comments: May Thinn
12/09/2010 at 11:25 pm	Very thoughtful piece. I totally agree about the last sentence and I also have been thinking how I should prepare for that moment.
13/09/2010 at 2:21 am	ကိုယ်နဲ့နီးစပ်သူတွေမဆုံးပါးခင်.နောက်ဆုံးအကြိမ်တွေမှာသွားကြည့်ဖြစ်တိုင်း…
(မှတ်ချက်။ ။ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ်တွေးဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေးလေးသတိရသွားစေမိလို့ချရေးလိုက်တာ။ ပို့စ်နဲ့မဆိုင်တာမန့်သလိုဖြစ်သွားမိရင်ဆောရီး🙂 )
13/09/2010 at 7:50 am	အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပိုစ့်ပါ၊